भाटभटेनीलाई लगियो टुँडालदेवीमा - Dainik Online Dainik Online
भाटभटेनीलाई लगियो टुँडालदेवीमा
प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ९ : ५८
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ रहेको भाटभटेनी देवीको मूर्तिलाई महानगरपालिकाको वडा नं. ४ स्थित टुँडालदेवी पु¥याइएको छ।
टुँडालदेवीको हराएको गहना खोज्न प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि सुरु गरिने भाटभटेनीको जात्रा अन्तर्गत आज बेलुकी देवीलाई सारिएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि सुरु गरिने भाटभटेनी जात्रा आजदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.५ को हाँडीगाउँ र वडा नंं ४ को टुँडालदेवी बालुवाटार क्षेत्रमा सुरु भएको हो।
जात्राका लागि नक्साल चार ढुङ्गेको माने खटसमेत आज रातिसम्म टुँडालदेवी लगिने जात्रा सञ्चालन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.५ का अध्यक्ष रमेश डङ्गोलले जानकारी दिए।
भातको देउता बनाएर आज टुँडालदेवीमा लगिने जानकारी पनि उनले गराए। आज बेलुकीदेखि सुरु भएको भाटभटेनी जात्रा काठमाडौँमा मनाइने महत्वपूर्ण र अद्वितीय जात्रामध्ये एक हो। यसलाई हाँडीगाउँ, टुँडालदेवी र गहना खोज्ने जात्रा भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ।
यही जात्राका लागि भाटभटेनीलाई रङरोगन गरी मन्दिरबाट बाहिर निकाल्ने गरिन्छ। यो जात्रा सुरु भएको सम्बन्धमा एउटा कथा प्रचलित छ। धेरै वर्ष पहिले चण्डोलको टुँडालदेवी, नक्सालको महालक्ष्मी, बालाजुको मनमैँजु र नुवाकोटी देवी स्नान गर्न भनी ठूलो ताल अर्थात् हाल गहनापोखरी भएको स्थानमा गएछन्।
स्नान गर्ने क्रममा टुँडालदेवीको गहना पोखरीमा हराएछ। त्यसैबेलादेखि यो पोखरीको महत्व बढ्नुका साथै नाम पनि गहनापोखरी राखिएको रहेछ। त्यसै समयदेखि जात्रा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। रासस